Lacagta ugu sareysa ee Forex ee Ganacsiga ee 2019 - Lacagaha ugu wanaagsan ee Forex Trading
Maqaallada aasaasiga ah
Sida loo akhriyo jaantusyada Forex
Baro tallaabo Forex Trading tallaabo talaabo
Maxaa ku faafaya Forex Trading?
Waa maxay baddelka Forex?
Koontada ECN XL +
ECN XL (Koonto Zero)
Lacagta ugu sareysa ee Forex ee Ganacsiga ee 2019 - Lacagaha ugu Fiican ee Lacagta
Astaamaha Aasaasiga ah ee ganacsiga EUR / USD
Labada awood ee dhaqaale ee adduunka ugu weyni waa mid aan caqli gal ahayn Midowga Yurub iyo Maraykanka. Dollar, oo sidoo kale loo yaqaan 'Greenback', ayaa ah lacagta ugu caansan adduunka iyo sidoo kale midka ugu ballaadhan, oo ka dhigaya EUR / USD labadii lamaane ee ugu caansanaa ee ganacsiga.
Iyadoo ay jirto xaalad dhaqaale oo joogto ah, labada nin waxay bixiyaan faafitaan aad u hooseeya oo ah doorashadii ugu horeysay ee ganacsade kasta oo doonaya faa'iido laga helo maalgelinta suuqyada maaliyadeed. Go'aamada ganacsiga ee la ogeysiiyey iyo istiraatiijiyado ballaadhan oo ganacsi ayaa loo adeegsan karaa labadaas, sababtoo ah ilaha dhaqaalaha iyo dhaqaalaha ee saameynaya jihada qiimaha suuqa. Sidaa darteed, fursado badan oo furan si ay u sameeyaan faa'iido lacageed oo weyn oo ka yimaada heerka isbedelka isbedelka ee is-bedbedelka labadaan nin ayaa tilmaamaya.
Jihada suuqa qiimaha suuqyada ganacsiga ee EUR / USD waxaa lagu qiyaasaa xoogga isbarbardhiga ah ee labadan dal ee ugu waawayn dhaqaalaha. Si fudud loo sharraxay, haddii dhammaantood ay joogto yihiin, dhaqaalaha Maraykanku wuxuu diiwaangaliyaa koboc degdeg ah, waxay keeni doontaa Dollar in ay xoojiso lacagta euro-da. Hase-yeeshe, waa haddii runta uu yurubta yurubiyanku kor u kaco dhaqaalaheeda, taasoo horseed u noqon doonta inay noqoto dawlad xoog leh, marka la barbardhigo Doolarka oo daciifinaya.
Mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee isbeddelka awoodda qaraabada waa heerka dulsaarka dulsaarka. Marka lacagta dulsaar ee lacagta Maraykanku ay ka xoog badantahay kuwa ugu muhiimsan ee dhaqaalaha yurubiyaanka ah, waxay ku xisaabtamayaan lacag adag oo ah lacagta Maraykanka ee Euro. Haddii dulsaarka dulsaarka ah ee euro uu yahay mid xoogan, Dollar sida caadiga ah waa ay dhacdaa. Markaad tani sheegto, qiimaha dulsaarku kali maaha in uu qiimeeyo sicirka suuqa sicirka.
Dhaqdhaqaaqa EUR / USD ayaa aad u sarreeyaa xasillooni la'aanta siyaasadeed ee lacagta euro-da, maadaama xaqiiqda la aqoonsan yahay in lacagta euroda ay tahay tijaabo dhaqaale iyo siyaasad lacageed. Kala duwanaansho isbeddelka iyo kala duwanaanta u dhexeeya waddamada ka kooban xisaabta EU-da oo xoog leh oo Doolar ah oo ka dhan ah Euro.
Kuwani waa suuqyada ganacsiga ee EUR / USD oo aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaan lagu maalgelin suuqa kala iibsiga ee ugu caansan suuqa.
Astaamaha Aasaasiga ah ee ganacsiga GBP / USD
GBP oo sidoo kale loo yaqaan Kabta, British Pound ama xitaa lafdhabarta, waxay u egtahay in ay ka ganacsanayso isbeddel ballaaran inta lagu jiro maalinta. GBP / USD waxaa loo aqoonsaday inuu yahay midka ugu caansan ee dhaqaalaha ah maadaama aysan ahayn wax aan caadi ahayn oo lagu arko digniin been abuur ah iyo dhaqdhaqaaq aan la saadaalin karin. Haysashada isbedelka aan la filayn ee sicirkeeda waa jiidashada ugu weyn ee ganacsatada waayo-aragnimada khibradeed iyo waliba maalgelin aad u adag oo loogu talagalay bilowga.
Isticmaalka Falanqaynta farsamada iyo wararka aasaasiga ah ee ka imanaya Boqortooyada Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa ah sababo caadi ah oo lagu iibsanayo labada lamaane si loo ogaado habka laguugu caawinayo inaad kordhiso fursadaha faa'iidada. Waxaa jira dhowr talo oo wanaagsan oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad doorato GBP / USD. Isticmaalida istaraatijiyad ganacsi oo hubaal ah oo wanaagsan waxay ku salaysan tahay had iyo jeer in aad isweydiineysid wararka ku saabsan dhaqaalaha labadaba gaar ahaan si loo ogaado oo loo ilaaliyo wararka dhaqaalaha ee lama filaanka ah kaas oo sababi kara dabeecad khaldan ee qiimaha suuqyada.
Astaamaha Aasaasiga ah ee ganacsiga USD / JPY
Jaangooyooyinka ugu macquulsan ee ku jira dhaqaalaha guud ee Asia ayaa sidoo kale ah nooc ka mid ah wakiil oo dhan kobaca dhaqaalaha Asia. Marka xasillooni darro lagu arko qaybta Aasiya, ganacsatada guud ahaan waxay ka jawaabaan iibinta ama iibsiga jaangooyada inay beddelaan lacagaha kale ee Aasiya oo aan fududeynin ganacsiga. Waxaa sidoo kale lagama maarmaan ah in dhaqaalaha dhaqaalaha Japan uu diiwaan gashaday xilligii diiwaangelinta ee kobaca dhaqaalaha oo hooseeya iyo duleelka dulsaarka hooseeya. Marka ganacsiga USD / JPY la iibiyo, waa tusaalihii ugu horreeyay ee jihada qiimaha mustaqbalka waa dhaqaalaha Japan kaas oo ah inaanu dareenka siino.
Wareegyo badan oo forex ah waxay aqoonsadaan doorka saameynta ee Yen ee doorka ganacsiga. Sababtoo ah siyaasadda dulsaarka dulsaarka hoose ee Japan ee qabatay inta badan 1990s loogu talagalay 2000s, ganacsatada ayaa ku amaahday lacagta Japanese qiimo yar ka dibna waxay u isticmaaleen si ay u maalgashadaan lacagaha kale ee wax soo saaraya. Tani waxay dhalisaa faa'iidooyinka kala duwan ee kala duwanaanshaha.
Sidaa daraadeed, xaaladda caalamiga ah, amaahda joogtada ah ee qiimeynta cusub ee Yen ayaa loo arkaa inay tahay hawl culus. Xitaa sidaas, ganacsiyada Cusub ee isla aasaasiga asaasiga ah sida lacagta kale.
Mid ka mid ah saameynta ugu weyn ee qiimaha ah ee qiimaha lacagta Japanese waa US Dollar. Habdhaqanka aan la saadaalin Karin ayaa ah sababta ay ganacsatada ganacsigu u isticmaalaan falanqayn farsamo si ay u fahmaan dhaqdhaqaaqa lamaanahan, iyada oo mustaqbalka fog. Qiyaasaha ganacsiga joogtada ah waxay ku kala duwanaan karaan pink 30 ama 40 si aad u sarreeya pips 150.
Furo BILAASH LACAG LA'AAN AH Maanta!
COUNTRY Afghanistan Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia, State of Plurinational Bosnia iyo Herzegovina Botswana Brazil Territory British Indian Ocean Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Cayman Islands Central African Republic Chad Chile Shiinaha Cocos (rukuucda) Islands Colombia Comoros Congo Congo, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah Cook Islands Costa Rica Cote d'Ivoire C Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Jabuuti Dominika Dominican Republic Ecuador Masar El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Itoobiya Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana Faransiis Polynesia Faransiis Southern Dhulalka Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Quduuska Fiiri (Vatican City State) Honduras Hong Kong Hungary Iceland Hindiya Indonesia Iran, Republic of Islamic Ciraaq Ireland Isle of Man Israa'iil Italy Jamaica Japan Jersey Urdun Kazakhstan Kenya Kiribati Jamhuuriyadda Korea, Democratic People ee Korea, Republic of Kuwait Kyrgyzstan Jamhuuriyadda Lao Dadka Democratic Latvia Lubnaan Lesotho Liberia Liibiya ee Carabta Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macao Macedonia, hore Yugoslav Republic of Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Islands Marshall Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia, Federaalka ah Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands Netherlands ruux.dalka New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island Northern Mariana Islands Norway Cumaan Pakistan Palau Territory Falastiin, degan Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Filibiin Pitcairn Poland Portugal Puerto Rico Qadar Reunion R Romania Russian Federation Rwanda Saint Barth Saint Helena, loosoo iyo Tristan da Cunha Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Martin (qayb Faransiis) Saint Pierre iyo Miquelon Saint Vincent iyo Grenadines ah Samoa San Marino Sao Tomé iyo Principe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Jasiiradaha Solomon Soomaaliya Koonfur Afrika South Georgia iyo Islands Sandiwiij South Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard iyo Jan Mayen Swaziland Iswidhan Switzerland Suuriya Arab Republic Taiwan, Gobolka Shiinaha Tajikistan Tansaaniya, United Republic of Thailand Timor Leste- Togo Tokelau Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Turkmenistan Turkiga oo Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates Boqortooyada Ingiriiska Uruguay Uzbekistan Vanuatu Venezuela, falal lidi ku Republic of Ka taagnaayeen colaado sababay Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis iyo Futuna Western Sahara Yemen Zambia Zimbabwe
Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) waxay ka diiwaangashantahay Sharciga Caalamiga ah ee Shirkadaha [CAP 222] ee Jamhuuriyadda Vanuatu iyada oo leh lambarka 14576.